Bato reMDC Alliancce rinotungamirirwa naVaNelson Chamisa riri kutarisirwa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana kushaya, idzo dzichaitwa musi wa 26 Kurume.
Bato irir riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDC-T, VaDouglas Mwonozra, rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance.
Rimwe zvakare bato rine muzinda waro muGweru, rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwechete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission tsamba richipa zita raro seMDC Alliance.
Ukuwo, ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro.
Asi izvi zvaunza maonero akasiyanasiyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti VaChamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDC-T zvinozoitika zvakare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCentre for Natural Resource Governance, VaFarai Maguwu, ndemumwe wevanhu vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, vachiti zvinhu zvaigona kungonakira VaChamisa nebato ravo dai munyika manga muine matare anotonga asina kwaakarerekera.
VaMaguwu vanoti nemamiriro akaita zvinhu, matare anongopa zvakare mutongo wekuti nhengo idzi ndedzaVaMwonzora nebato ravo reMDC-T sezvakamboitika kare.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Doctor Urayayi Zembe, vanoti VaChamisa havafanirwi kuchinja zita musarudzo dze by-election dziri kuuya idzi sezvo nhengo dzavo dzakadzingwa dzakanga dzakasarudzwa kwemakore mashanu kubva muna 2018 kusvika muna 2023 pasi pezita reMDC Alliance.
Doctor Zembe vanoti chinofanirwa kuzoitwa naVaChamisa nebato ravo kuchinja zita musarudzo dza2023 kuitira kupedza makakatanwa nezita rekuti MDC zvachose.
Hurukuro naDoctor Urayayi Zembe pamwe naVaFarai Maguwu